October 2017 – Shwemyanmar
လူတိုင်း ကြည့်ထားပြီး သိထားသင့်တဲ့.. (၇) ရက်သားသ္မီးများ၏ စိတ်နေစိတ်ထားများ…
၇ ရက်သားသ္မီးများ ၏ စိတ်နေစိတ်ထားများ 💫 ❝ ပုံ​လေး​တွေကို ​ကြည့်​​ပေးပါ။ ပုံ နှင့်​သက်​ဆိုင်​​သော ၇ ရက်သားသ္မီးများ၏ စိတ်နေစိတ်ထားများကို ပုံ​လေးနဲ့အတူ တပါတည်း ​ရေးသား​ပါတယ်​ ခင်​ဗျာ။ တနင်္ဂနွေသား သမီးတို့၏အကြောင်းသိကောင်းစရာ တနင်္ဂနွေနေ့နာမ်များဟာ လူ့ဘဝကိုစရောက်ပီဆိုကတည်းကစိတ်ကြီးတယ်။ ငိုလွယ်တယ် ဒေါသဖြစ်လွယ်တယ်။ ပျော်ပျော်လည်းနေတတ်သလို။ ဒေါသဖြစ်ရင်လည်း သူမဟုတ်တော့အတိုင်းပါပဲ။ မိသားစုအပေါ်တွေမှာလည်း သံယောဇဉ်ရှိတတ်သလိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုလည်း ချစ်တတ်ကြတယ်။ တနင်္ဂနွေတွေဟာ မိသားစုအပေါ်ကိုသိတတ်တယ်။ စွန့်စားပီးပေးဆပ်တတ်တာလည်း တနင်္ဂနွေပါ။ တနင်္ဂနွေများဟာ စိတ်ပြတ်သားသလောက် အစွဲအလန်းလည်းကြီးတတ်ပါတယ်။ 1ယောက်ဆိုတယောက်အပေါ်မှာလည်း စိတ်စွဲနေတတ်တယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အရာကို သူများလက်ထဲကိုမရောက်စေချင်တာ တနင်္ဂနွေ ။ တခါတလေ တစ်ယူသန်တဲ့စိတ်တွေလည်းရှိတတ်ကြတယ်။ ဒါဆိုရင်ဒါပဲ မပြောင်းလဲတတ်ဘူး ခေါင်းနဲနဲမာတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားတတ်တယ်။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ ဘယ်တော့မှလက်မလျော့တာ တနင်္ဂနွေပါ။ […]
Posted inသုတရသ, ဗေဒင်LeaveaComment on လူတိုင်း ကြည့်ထားပြီး သိထားသင့်တဲ့.. (၇) ရက်သားသ္မီးများ၏ စိတ်နေစိတ်ထားများ…
​လူတိုင်း ကြည့်ထားပြီး သိထားသင့်တဲ့.. (၇) ရက်သားသ္မီးများ၏ စိတ်နေစိတ်ထားများ…
Posted inသုတရသ, ဗေဒင်LeaveaComment on ​လူတိုင်း ကြည့်ထားပြီး သိထားသင့်တဲ့.. (၇) ရက်သားသ္မီးများ၏ စိတ်နေစိတ်ထားများ…
ရှေးရှေးတုန်းက ယောက်ျားတွေနဲ့ မိန်းမတွေဟာ သီးခြားစီနေကြပြီး မတည့်ကြဘူးတဲ့… ( ဘာမတည့်တာလဲ သိဘူးနော် ) ယောက်ျားတွေဟာ မိန်းမနိုင်ငံကို ခဏခဏ စစ်သွားတိုက်တယ်တဲ့ တိုက်တိုင်းလည်း ယောက်ျားတွေသာ ခွေးပြေးဝက်ပြေးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြတာ ချည့်ပဲ တဲ့… ရှုံးမှာပေါ့ ယောက်ျားတွေဟာ ငပျင်းတွေဖြစ်ပြီး အရက်သောက် ဖဲရိုက် ဘိန်းရှုနေကြတော့ သူတို့ရဲ့ ဓါးလှံတွေကို သွေးရကောင်းမှန်းမသိဘူးတဲ့… မိန်းမတွေကတော့ ဝီရိယလည်းရှိ သတိ လည်းကောင်းတော့ အမြဲပဲ သူတို့လက်နက်တွေဟာ ထက်မြက်နေတယ်တဲ့… ဒါကိုသတိထားမိတဲ့ ယောက်ျား ဘုရင်ကြီးဟာ သူ့စစ်တပ်ကို အမိန့်ပေးတယ်… အရက်မသောက်ရ . . . ဖဲမရိုက်ရ . . . ဘိန်းမရှုရ . . . ဓါးလှံတွေကို လာထက်မြက်နေအောင် သွေးထားရမယ်… […]
Posted inFunnyLeaveaComment on ​ရှေး​ရှေးတုန်းက​ယောကျာင်္နဲ့မိန်​မသီခြာစီ​နေကြတယ်​..ဘာ​ကြောင့်​လို့ထင်​လည်း
ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် ၏ နောက်ကွယ်ကပါဝင်မှု ၁။ စစ်တကောင်းသားဘင်္ဂါလီများက လူမျိုးလိမ်နာမည်သုံးလျက် ရခိုင်ပြည်နယ်အထဲတွင် ဆူပူအကြမ်းဖက်ကာ သီးခြားနယ်မြေဖဲ့ထုတ်ရရှိရေး ကြိုးပမ်းနေမှု၏ အဓိက ဗိသုကာမှာ ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ရေတိုရေရှည်စီမံချက်များဖြင့် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ၂။ ပြောက်ကျားစစ်ဗျူဟာတို့၏ ကနဦးအစောဆုံးပညာရှင် တီအီးလောရင့်စ် (Lawrence of Arabia) ၏ အခြေခံသဘောတရားအရ၊ လျင်မြန်စွာ တက်ဆုတ် စစ်ဆင်နေသော ပြောက်ကျားတပ်များအနေဖြင့် (ရန်သူ့လက်မှ ကင်းလွတ်နေသော) ပင်​မ အခြေခံစစ်စခန်း ရှိနေရမည် ဖြစ်လေသည်။ ယခု ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သူများ၏ ထိုသို့သော အခြေခံစခန်းမှာ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ နိုင်​ခုန်းချရီ (Naikhongchhri) နယ်ထဲက နယ်ခြားစောင့်တပ်အမှတ် (၃၁) (BDB 31) နှင့် နီးကပ်စွာတည်ရှိသည်။ (မေယုတောင်တန်းရှိ ယာယီစခန်းများနှင့် ၄င်းတို့ခိုအောင်းရာ ဘင်္ဂါလီကျေးရွာများမှာ ယာယီစခန်းများသာဖြစ်သည်။) […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on ဘင်္ဂလား ​ဒေ့ရှ်​​နောက်​ကွယ်​ကပါဝင်​မူ..
“ဘဝမှာရူး​အောင်​ ချစ်​ရသူ မ​တွေ့​သေးဘူး” ဆိုတဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​/​မော်​ဒယ်​ ​မေမြင့်​မိုရ်
Posted inMyanmar ModelLeaveaComment on “ဘဝမှာရူး​အောင်​ ချစ်​ရသူ မ​တွေ့​သေးဘူး” ဆိုတဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​/​မော်​ဒယ်​ ​မေမြင့်​မိုရ်
ဲ့ ​တောင်​ကြီးသို့ အလည်​ခရီး ​ရောက်​ရှိ​နေတဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​ နန်းစုရတီစိုး
“အင်း​လေးကန်​ထဲမှာ ​လှေစီးပြီး ​တောင်​တန်း​တွေကို တစ်​ဝကြီး​ငေးခဲ့တယ်​” ဆိုတဲ့ ​တောင်​ကြီးသို့ အလည်​ခရီး ​ရောက်​ရှိ​နေတဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​ နန်းစုရတီစိုး ရဲ့ခရီးသွားအလှပုံရိပ်​​တွေပါ။ #myanmar cele
Posted inMyanmar ModelLeaveaComment onဲ့ ​တောင်​ကြီးသို့ အလည်​ခရီး ​ရောက်​ရှိ​နေတဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​ နန်းစုရတီစိုး
ဘုရားဝင်း၊ ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာ စုံတွဲတွေ ဘာကြောင့် ချိန်းမတွေ့သင့်တာလဲ
ဘုရားပရဝဏ်အတွင်းမှာ စုံတွဲတွေဟာ နေရာအနှံ့ ချိန်းတွေ့နေကြပါတယ်။ ဘုရားဆိုလို့လည်း သတိမထား၊ ဘုန်းကြီးရဟန်းရှေ့မှာလည်း ရှက်ရမှန်းမသိ၊ လူကြီးသူမရှေ့ ဆိုလို့လည်း အာရုံမစိုက်ဘဲ နေ့ခင်းကြောင်တောင်မှာ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြပါတယ်။ သမီးရည်းစားဆိုတာ မျက်စိကွယ်ရာ နားကွယ်ရာ ချိ်န်းတွေ့တာ သဘာဝဖြစ်ပေမယ့် ဘာသာရေးအဆောက်အဦးအတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာ မသင့်တော်လွန်းပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ အဂါရဝတရား (၆) ပါး အကြောင်းကို နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်။ အဂါရဝဆိုတာ မလေးစားတာ၊ တန်ဖိုးမထားတာကို ခေါ်ပါတယ်။ (၁) ဘုရားရှေ့မှာ မလေးမစားပြုမိခြင်း၊ (၂) တရားတော်ကို မလေးမစားပြုမိခြင်း (၃) သံဃာတော်ကို မလေးမစားပြုမိခြင်း (၄) ကိုယ်ကျင့်တရားကို တန်ဖိုးမထားခြင်း (၅) ကုသိုလ်တရားကို မမေ့ရဘူးဆိုတဲ့ အပ္ပမာဒတရားပေါ်မှာ မလေးမစားပြုမိခြင်းနဲ့ (၆) မိတ်ဆွေအချင်းချင်း မလေးမစားပြုမိခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ လေးစားမြတ်နိုးထိုက်တဲ့အရာတွေကို မလေးမစားပြုမိရင် လက်ရှိဘဝမှာလည်း […]
Posted inသုတရသLeaveaComment on ဘုရားဝင်း၊ ကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာ စုံတွဲတွေ ဘာကြောင့် ချိန်းမတွေ့သင့်တာလဲ
မြန်မာများကို လမ်းဘေးခွေးနှင့်ခိုင်းနှိုင်းခဲ့သည့် MYANKORE မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာချုပ် ကိုရီးယားလူမျိုးကို တရားစွဲမည်.
မြန်မာများကို လမ်းဘေးခွေးနှင့်ခိုင်းနှိုင်းခဲ့သည့် MYANKORE မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာချုပ် ကိုရီးယားလူမျိုးကို တရားစွဲမည်….. ————————— ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လထုတ် MYANKORE မဂ္ဂဇင်းတွင် မြန်မာများကို လမ်းဘေးခွေးနှင့် ခိုင်းနှိုင်း၍ ရေး သားခဲ့သည့် အဆိုပါမဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်သူ ကိုရီးယားလူမျိုး Mr. Shin Sung Hyun ကို တရားစွဲဆိုသွား မည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာကိုရီးယားပြန်အဖွဲ့(ယာယီ)၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလှထွန်းက News Watch သို့ပြောသည်။ MYANKORE မဂ္ဂဇင်း၌ Mr. Shin Sung Hyun က ”အောင်မြင်မှုနှင့် တိုက်ခိုက်ခြင်း (မြန်မာ့စစ်ရေးဗျူဟာ)” ဟူသည့်ဆောင်းပါးကို ကိုရီးယားဘာသာဖြင့် ရေးသားခဲ့ပြီး အဆိုပါဆောင်းပါးတွင် ”မြန်မာခွေးတွေဟာ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းနေပုံရကြတယ်။ မြန်မာတွေဟာ လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေနဲ့ တူကြတယ်လို့ ပြောတယ်။ အပူအပင်ကင်းမဲ့နေကြပြီး ရေကြီးသုတ်ပျာပုံစံမျိုး […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on မြန်မာများကို လမ်းဘေးခွေးနှင့်ခိုင်းနှိုင်းခဲ့သည့် MYANKORE မဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာချုပ် ကိုရီးယားလူမျိုးကို တရားစွဲမည်.
မြန်မာ့သမိုင်း တစ်ပတ်ပြန်လည်လာမလား ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် လွဲမှားသည့် နိုင်ငံရေးအသုံးချမှုများနှင့် မတည်မငြိမ်မှုတို့ ကြုံလာတိုင်း တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူခဲ့သည့်သမိုင်းများ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ် အာဏာ သိမ်းမှုအပြီး နှစ်ပေါင်း ၃၀ အကြာတွင် သမိုင်းတစ်ပတ်လည်ကာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အာဏာသိမ်းမှု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရသည်။ အလားတူ ၁၉၈၈ ခုနှစ် အာဏာသိမ်းမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး အနှစ် ၃၀ အကြာ ၂၀၁၈ တွင် History Repeats ဖြစ်လာမလားဆိုသည့် တွေးဆမှုကို ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသုတေသီများ က လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသည့် နိုင်ငံရေး အသုံးချမှုများအပေါ်တွင် မူတည်ကာ သုံးသပ်လာကြပါ သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ် နှင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ် တပ်မတော်က နိုင်ငံတော်အာဏာရယူမှုကို အာဏာသိမ်းမှုဟု ခေါင်းစဉ် တပ်လေ့ရှိကြသော်လည်း အခြားနိုင်ငံများတွင် […]
Posted inသတင်းLeaveaComment on မြန်​မာ့သမိုင်း တစ်​ပက်​ပြန်​လည်​လာမလာ…..
ဘ၀ လက်တွဲဖေါ် စစ်_မစစ်_စမ်းသပ်နည်း Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် စားပြီးသား မုန့် ကို ကျွေးကြည့်ပါ။ ( အော်အော့ လုပ်နေပြီဆို ဆောင့်ကန်ထားခဲ့… အားရပါးရ ရှိန်မနေပဲ စားနေပြီဆို အချစ်စစ်ပြီ သေတဲ့အထိ လက်တွဲမယ့်သူက ရွံနေဖို့လိုလို့လား ) ~တစ်ရေးနိုး သန်းခေါင်ကျော် ဖုန်း ထခေါ်ကြည့်ပါ။ ( ဘယ်လောက်ခေါ်ခေါ် မကိုင်ဘူးဆို ခေါက်ပစ်လိုက်… စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ ပျာပျာသလဲ ပြန်ထူးရင် အချစ်စစ်ပြီ ချစ်သူ အတွက်ဆို အမြဲ On Duty ဖြစ်နေရမယ်လေ ) ~ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ ခေါင်းပိတ် ခေါက်ကြည့်ပါ။ ( ဒေါသ ထွက်ပြီး ရန်ပြန်တွေ့တယ်ဆို ဝဲပစ်လိုက်တော့… စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ ပြန်ရယ်ပြနေရင် လုံးဝ လက်တွဲဖေါ်စစ်ပြီ ရစ်တဲ့ဆိုးတဲ့ […]
Posted inFunnyLeaveaComment on ဘ၀လက်​တွဲ​ဖော်​ စစ်​မစစ်​စမ်းသပ်​နည်း